ဝါရှင်တန်ပို့စ် မျက်နှာဖုံးရော ကျောဖုံးပါ ရိုဟင်ဂျာ နဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ် အကြောင်းဖော်ပြ | Burma Muslim
၀ါရှင်တန်ပို့စ် မျက်နှာဖုံးရော ကျောဖုံးပါ ရိုဟင်ဂျာ နဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ် အကြောင်းဖော်ပြ
By burmamuslim on July 8, 2014
credit : United to End Genocide
ဒီနေ့ (ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ထုတ်) အမေရိကန် က ၀ါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာ ကို ခင်ဗျားတို့ မြင် ပြီးသွားပြီလားဗျ။ မျက်နှာဖုံး စာမျက်နှာရော နောက်ကျောဖုံး စာမျက်နှာရော အဖွင့်အပိတ် နှစ်ခုစ လုံးမှာ ဖိနှိပ်ခံ ရိုဟင်ဂျာတွေ နဲ့ မြန်မာပြည်က မတရား ပြုနေမှုတွေ အကြောင်းတွေကို ဖော်ပြ ထား တာ ခင်ဗျား တွေ့ရလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်က မတရားလုပ်နေတာတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူအများကို အသိသတိ ရှိစေရေး ကျွန် တော်တို့ ဆောင်ရွက်နေတာတွေဟာ အလုပ်စဖြစ်နေပါပြီ။
Have you seen the Washington Post today? The front and back cover are dedicated to the oppressed Rohingya and injustice in Burma. Our work to raise awareness is paying off.
United to End Genocide ၏ မူရင်း လင့်ခ် ကို https://www.facebook.com/photo.php?fbid=897001743647004&set=a.332325253447992.96749.205653499448502&type=1&theater မှ ဖတ်နိုင်ပြီး
၀ါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာ မူရင်းလင့်ခ် ကိုတော့ ဒီမှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်